Semalt Expert ao amin'ny Internet Banking Security
Ny kaonty mampiady varotra nomerika ary manakatona fifanakalozana sandoka amin'ny fomba maro samihafa. Ny drafitra ao amin'ny Complex dia ny fampiasana malaila mandroso be dia be ny asa fanaovan-gazety. Ny mpikamabana dia mitazam-panafana ny fananganana rakitsary ary mandray vola amin'ny fanamafisana tsotra izao ataon'ny olona, ​​izay asehon'ny Tompon'andraikitry ny Success Success of Semalt , Oliver King.
Ny kapaoty dia manatona tahirin-tahirin-kevitra be dia be misy ny anaran'ny kaonty, tahirin-tsoratra manokana, manangona tombontsoa amin'ny vola, ary betsaka kokoa. Ny fikambanana Cybersecurity Hold Security dia nanambara tsy ela akory fa efa nahazo mari-pankasitrahana nangalarina avy amin'ny 360 tapitrisa rakitra azo vidiana azo vidiana ao amin'ny tranokala ambanin'ny tany. Ankoatra izany, mpitsikilo izao dia naneho ny fomba hamerenany ny tenimiafina hanitatra ny zava-bitany amin'ny fampiasana ity fivarotam-baovao ity mba hahazoana vola an-tserasera.
Ny vondron'orinam-pahaizana diso fananantsika dia nanaraka ny fandehan'ny fandrosoana manohitra ny mpanjifantsika izay nanambana mpanjifa maro be ary banky vitsy an'isa ary farafaharatsiny dimanjato sy banky iraisam-pirenena. Ny fanafihana rehetra dia nampiditra ny fampiasana ny "fanalahidy miafina amin'ny tsiambaratelo" mba handresena ny fanamarinana, ary ny fikambanana rehetra dia maro ireo niharan-doza nanamafisany fa rehefa neken'ny mpangalatra fa afaka mandany iray firaketana amin'ny fomba mahomby izy ireo, dia nanaraka haingana kokoa.
Na teo aza izany, rehefa tafiditra tao amin'ny rakitsoratra izy ireo, dia nanao fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny tranonkalan'ny tranonkala izay niampangana azy ireo tamin'ny rakitsoratra, ny angon-drakitra voatahiry, ary taorian'izay..Ao amin'ny anjara asan'ny liona, dia tsy nanandrana fifanakalozam-bola izy ireo tamin'ny alalan'ny famatsiam-bola amin'ny aterineto.
Na dia tsy nisy fifanakalozan-dresaka natao tamina tranonkala mifototra amin'ny vola aza, dia tokony handinika izany fahadisoana izany ny fikambanana ara-bola. Ireo mpandika lalàna tsy ara-dalàna dia nahazo ny rakitsoratra ary afaka mampiasa ny angon-drakitra raketina amin'ny karazana làlana ho an'ny tombony vola. Ny fampahalalam-baovao, ny tantara taloha na ny fampahafantarana amin'ny rindrambaiko, ny marika, ary ny fanamarinana ny fampahalalana dia azo ampiasaina ho an'ny fanodinkodinana maimaimpoana sy fanendrikendrehana misongadina amin'ny karazana fandaharana.
Nokarohin'ny Crooks ny firaketana an-tsoratra sy ny firaketana an-tsokosoko (kaonty misy tahiry, nefa tsy misy hetsika). Ny singa iray azo itokisana dia ny fampiasana ny singa manan-tompo miafina miafina mba hamaranana ny fizotran'ny fidirana. Ny mpidoroka dia miditra amin'ny anaran'ny mpanjifa ary mametaka ny fangon'ny fanadihadiana miafina miafina, izay naneho ny fanontaniana iray fanadihadiana, ny valin-teny izay nahatonga ilay mpangalatra izay efa manana, ary aorian'izay, dia mety hamerina ilay teny filamatra.
Indray mandeha tao amin'ny rakitsoratra, ireo mpandika lalàna dia naneho ohatra mitovy amin'ny fitondran-tena ankapobeny, mitadiava fomba fanao manokana momba ny firaketana sy ny loza. Ny singa mahazatra nampiasaina dia ny "View Record Record Rundown", "Tantara momba ny fandoavam-bola," ary ny "View Check Pictures".
Mandamina ny rafitra fiarovana izay miantoka amin'ny ankamaroan'ny fomba izay hanaparitahana rakitsoratra, fa tsy malware fotsiny.
Jereo ny fifanakalozana sy ny fanombanana ny hetsika amin'ny aterineto rehetra ao amin'ny mpanjifa dia maneho ny fitondran-tena tsy mahazatra, anisan'izany ny ohatra nasehony teo aloha.
Mamaritra ny mpanjifanao mba hanamarina ny fidirana diso amin'ny haingana araka izay azo atao. Ny fametrahana fihetsika aloha dia handany fotoana sy vola any aoriana.
Arakaraky ny tsy fahafantaranao ny asa fitaka, dia mikaroka karazan-tsaranga samihafa.
Rehefa manamarina ny rakitra an-tserasera ianao dia mametraka fanairana ireo rakitsoratra ary mitady hetsika sandoka amin'ny sehatra rehetra, indrindra fa ny fangatahana tariby ary ny fanamarinana diso Source .